Halkee Qof Walba Ka Leeyahay (WEB) - Dugsiyada Robbinsdale Area
Meelkasta oo qof kastaa iska leeyahay (WEB) waa barnaamij ku-meelgaar ah oo soo dhaweynaya ardayda fasalka 6-aad ee dugsiga dhexe iyada oo ujeedadu tahay in ardayda cusub laga dareemo raaxo sannadka ugu horreeya ee waayo-aragnimadooda dugsiga dhexe. Himilada WEB waa inay bixiso qaab dhismeed kaas oo ardayda ay xiriir dhab ah ka yeeshaan midba midka kale. Barnaamijkan ardayda waxay ku bartaan in dadka dugsiga jooga ay daryeelaan iyaga iyo guushooda.
U guurista dugsiga dhexe waxay noqon kartaa dhacdo weyn oo nolosha qofka dhalinyarada ah. Abuuritaanka jawi waxbarasho oo aamin ah oo hufan dhammaan ardayda ayaa ah muhiimadda koowaad. Daraasado badan iyo inbadan waxay muujinayaan ardayda khibrada wanaagsan ku leh dugsiga dhexe inay leeyihiin fursado badan oo ah sii wadida guusha dugsiga sare.
WEB waxay ku dhisan tahay aaminaadda in ardaydu doonayaan inay guuleystaan, ayna caawin karaan ardayda kale inay guuleystaan. Barnaamijka WEB wuxuu tababar u siiyaa xubno la xushay oo ka tirsan fasalka 8-aad inay noqdaan Hoggaamiyeyaasha WEB. Hoggaamiyeyaasha WEB waxay u adeegaan sidii tusaalayaal wanaagsan oo lagu daydo, dhiirrigeliyeyaal, hoggaamiyeyaal iyo macallimiin haga ardayda fasalka 6aad si ay u ogaadaan waxa ay u baahan tahay si loogu guuleysto dugsiga dhexe.
WEB waxay ku bilaabmaysaa maalin hanuuninta firfircooni iyo firfircooni leh si ardayda fasalka 6aad ugu faraxsanaadaan uguna hanweynaadaan ka qeybgalka dugsiga dhexe. Waxay u oggolaaneysaa ardayda inay bilaabaan inay xiriir la yeeshaan ardayda kale, iyo sidoo kale inay bartaan istaraatiijiyado gacan ka geysan doona guusha dugsiga dhexe. WEB waxay sii socotaa jihada ka dib, iyadoo bixisa noocyo kala duwan oo ah Waxqabadyada Tacliinta iyo Bulshada ah sanadka oo dhan. Qeybta-Tacliinta Sare waa casharo ay soo bandhigeen Hogaamiyaasha WEB ee tababaran inta lagu guda jiro booqashada fasalada fasalka 6-aad. Casharradan waxaa loogu talagalay inay siiso ardayda fasalka 6aad xirfadaha loo baahan yahay si loogu guuleysto inta lagu jiro sannadaha dugsiga dhexe iyo wixii ka dambeeya. Barnaamijka 'Social Follow Ups' wuxuu siiyaa dejinta bulshada Hoggaamiyeyaasha WEB iyo kooxahooda inay dib isugu xirmaan oo ay sii dhisaan xiriiro ka baxsan fasalka.